Podcast | Hery - Tsiky dia ampy |
2021-06-03 @ 20:29 in Izaho sy ny ahy
Mpihaino radio mavitrika aho, ary hitako hoe raha eto Frantsa dia mbola manan-danja ihany ny radio na dia eo aza ny firongatry ny internet sy ny fahitalavitra. Ny anisan'ny itiavako ny radio dia noho izy tsy mibahana ny asan'ny maso. Na dia mandeha aza ny radio dia mbola afaka manao ny asa fanaoko ihany ny masoko... na dia hoe marina fa mihena kely aza ny fifantohan'ny saina. Ny radio tena henoiko matetika dia ny France Inter, FM 95,70 izy raha avy eto amin'ny toerana misy anay. Efa mila ho haiko tsianjery avokoa ireo fandaharana sy ny mpanolotra azy. Azo atao hoe radiom-panjakana, ilay antsoin-dry zareo Frantsay hoe "service public" ny France Inter ka matotra kokoa ny fandaharana vokariny. Misy izany ny fandaharana ankafiziko manokana fa misy koa ny tonga dia dinganiko avy hatrany. Resaka safidy ilay izy ka tsy dia tena hoe hovelabelarina.
Fa ny antony nanoratako ity dia te hizara aminareo mpamaky aho hoe ankoatra ny radio mivantana dia miha-malaza koa amin'izao ny resaka podcast. Izany hoe karazana radio tsy mivantana. Azo eritreretina hoe mitovy amin'ireny youtube ireny izy saingy tsy sary fa feo kosa. Izany hoe karazana fandaharana mpandeha amin'ny radio no henoinao fa tsy mivantana. Afaka misafidy izany ianao araka izay tianao. Ankoatra ny fandaharana mpandeha ao amin'ny radio France Inter ary dia nanintona ahy tato ho ato ny tantara vokarin'izy ireo izay mivoaka ao amin'ny Les fictions de France culture... satria tena izany koa ny podcast... misy tantara izay azonao henoina. Tantara foronina tahaka ireny mpandeha amin'ny radio tany Madagasikara ireny, saingy amin'ny teny frantsay mazava ho azy. Raha hihaino sombin'ny zavatra nahaliana ahy ianareo dia afaka mihaino avy hatrany eto ambany eto. Misy tantara fohy tahaka izao koa mantsy ao.
Dia lasa mitombo kely ny eritreritro hoe tsy tokony ho azo atao ve ny zavatra toa izany amin'ny teny malagasy? Tena mahaliana ahy raha mba misy toerana fitehirizana tantara na fandaharana maro amin'ny teny malagasy. Raha misy ny mpanohana dia vonona ny hanomboka izany ao amin'ny RadioVazoGasy aho...